Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 02/06/2020)
Ny ankehitriny valan'aretina ny Coronavirus manipy ny diany rehetra ho korontana tanteraka, dia mety ho sarotra ny hahafantatra raha tokony foana ny vakansy mandritra ny Coronavirus na tsia. Na dia tsy afaka manao fanapahan-kevitra ho anao izany raha misafidy ny hanohy zava-dehibe mba hahazoana antoka ianao maka fepetra mba hiarovana ny fahasalamana. Noho izany, eto dia 7 Travel torohevitra ny hanampy anareo ho salama mandritra ny diany.
Izany no fanontaniana sarotra indrindra misotro toaka mandritra ny diany ihany koa. Izany dia midika hoe tsara fantatra fa misotro toaka be loatra dia afaka hitondra any amin'ny nampidinina hery fiarovana (ary ny sasany ratsy fanahy hangovers). Raha miezaka ianao mba tsy mahazo marary, ho azo antoka mitandrina ny fisotroana toaka ho faran'izay kely. Sady koa anie, izay te-hitsidika ny Mona Lisa miaraka amin'ny sery mahazatra?